डा. गोविन्द केसी अनसन तोड्दै, चिकित्सक संघद्वारा संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता – Himshikharnews.com
डा. गोविन्द केसी अनसन तोड्दै, चिकित्सक संघद्वारा संघर्षका कार्यक्रम फिर्ता
२५ आश्विन २०७७, आईतवार ०८:४८
डाक्टर गोविन्द केसीले आज अनसन तोड्दैछन् । सरकारसँग आठ बुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन तोड्न लागेका हुन् ।
यसअघि मध्यराति अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधिबीच आठ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सहमतिमध्ये छ बुँदे डाक्टर केसीको मागका विषय रहेका छन् । ७ नम्बर बुँदामा सहमति कार्यान्वयनको विषय छन् । ८ नम्बर बुँदामा अनशन तोड्ने विषय छन् । मागलाई सरकारले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि दुवै पक्षबाट वार्ताका लागि गठित दुवै टोलीबीच मध्यरातमै सहमति खोज्ने प्रयास गरेका थिए । २७ औं दिन अनशनमा बसिसक्दा पनि सहमति ननिस्किएपछि डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लािग सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढेको थियो ।
यसैगरी डाक्टर केसीसँग सम्झौता भएपछि चिकित्सक संघले आव्हान गरेको संघर्षको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो ।
जलेको रेडियोलाई हिमाल एफएमद्वारा
सरकारी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन
धमाधम स्तरोन्नती हुँदै पर्यटकीय
दूककुण्डमा धार्मिक पर्यटकको आकर्षण बढ्दै
काँडे भ्याकुरको विवाह !
सोलुखुम्बु काठमाण्डौ सम्पर्क समितिको कार्यक्रमलाई देउवा र पौडेलले सम्बोधन गर्ने
यस्तो छ एसईई परीक्षाको तयारी
छोटो समयमा नै जीवन बीमा कम्पनीतर्फ ईतिहास रच्दै यूनियन लाईफ इन्स्योरेन्स
सोलुखुम्बु प्रहरीलाई पुस्तक हस्तान्तरण